Amageyimu / Izicelo / Ukusebenza Okunamandla kwe-WEB / IoT Development - Shiya uma ukuthuthukiswa kwemidlalo, izinhlelo zokusebenza, uhlelo lwe-WEB, ukuthuthukiswa kwe-IT kanye nokusebenza!
Uhlelo lweWEB / uhlelo lokusebenza / ukuthuthukiswa kwenzwa ye-IoT
Ukwesekwa kokusungulwa kwe-VR · okuqukethwe kokukhiqizwa kokuqukethwe
I-フ ェ イ ス ブ ッ ク (esemthethweni)
Isi-Chinese (esenziwe lula)
Ukwaziswa kwamuva ku-Mighty Craft
[Cindezela ukukhululwa] I-Super Real Mahjong P8 ikhishwe
Mayelana neholide ehlobo
NgoJulayi 22, 2018
Sithumele isicelo sokudlulisa ngefeksi
Ngo-Julayi 10, 2018
Sizokusekela ukuxhuma kuseva yokuhlala engasisekeli i-TLS 1.2
Ngo-Meyi 30, 2018
Isevisi ye Dragon Dragon Shogi Online (Futurephone ehambisanayo) iyoqedwa
Ngo-Ephreli 1, 2018
Kungumsebenzi weMighty Craft
Kusuka kuzicelo ze-smartphone (i-iPhone / Android), imidlalo yomphakathi namageyimu wabathengi, sicela uhlale uhlale uhlanganisa ukuhlela iphrojekthi, ingqalasizinda yesiphakeli, ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza, ukuphathwa kwemicimbi. Sinikeza uhlelo oluqinile lwekhwalithi ngohlaka lwethu lweselula. Siphinde sinikele imidlalo emaphethelweni okusebenza kwamanye amazwe, sicela uxhumane nathi ukuze uthole indawo yangakini ezweni ngalinye.
Isixazululo seSelula neWebhu
Sinikeza isevisi eyodwa yokumisa kusuka ekuhleleni ~ ukukhiqiza ~ ukukhiqiza ~ ukusebenza ~ ukubuyekezwa Sizophendula isivinini sempendulo ngokukhiqizwa kwangaphakathi kanye nokukhiqizwa nokusebenza ngokuya kokukhula kwesayithi elihambisana nesiphakeli sefu. Silandele irekhodi lamasayithi amaningi we-smartphone, izinhlelo ze-HTML, ukuthuthukiswa kwegeyimu ye-SNS, ukwakhiwa kwesayithi le-PC, ukwakhiwa kwefu kanye nokusebenza.Singakwazi ukusingatha ukulinganisa ukulayisha, inkinga yophenyo / izincwadi, ukuthuthwa kweseva njll. Sicela ubuze njengomlingani wenkampani yakho ngazo zonke izindlela.Siba nempumelelo eminingi yesicelo sewebhu sesicelo sebhizinisi!
Sizophakamisa ukudalwa kwe-VR kokuqukethwe, isingeniso se-VR ukuzijabulisa uhlelo, njll.
Isevisi yohlelo lokusebenza
Kusuka ku-MightyCraft enhle kumdlalo wezenhlalo, umkhiqizo omusha ugxile ekusebenziseni okungajwayelekile, i-application demonstration application ivela! Uma kubonakala kuyithakazelisayo ngisho nangamathuba amancane kuyoyiloba! Njengendawo yokuthola ubuchwepheshe obunamandla "Mighty Craft" ngokholo, ngizoqhubeka nokukhulula kusuka "studio ye-owl" esikhathini esizayo!
Sizoletha ezinye zezinkampani zethu. Kunezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-400 zezicelo nezindawo ezingaphezu kuka-50 zezinhlelo zewebhu.
I-Super Real Mahjong
Indawo yokudlela ye-puzzle yeKokkuma
Dragon ukugijima counterattack
I-Pocket Billiard 3D
Ibhulogi yekhono le-Mighty Craft
Yenza ibhokisi ku-Chatwork (1) - iwebhubhuok nge-php
Ungasebenzisa i-webhook ye-Chatwork API / Uma unobhulogi ungakhuluma ku-Chatwork / Usebenzisa i-webhook Ukuguqula kuqala / Qinisekisa idatha ethunyelwe nge-webhook nge-PHP[...]
Ukunciphisa isivinini sejubane ku-Sapporo no-DS-Lite (IPv6 IPoE) uxhumano
Ehhovisi le-Sapporo, ukunciphisa kwejubane le-FLET ye-NTT 's optical fiber kwaba inkinga. Uhlobo lwe-FLET'S uhlobo lwendawo yokuhlala eyi-100 Mbps. Emini kungakhathazeki kakhulu, kodwa ukunciphisa isivinini emva kokuhlwa kusiwumsebenzi kuye ngosuku[...]
Shintsha kabusha ukwahlukanisa kwe-Linux (umugqa womyalo)
Umthamo wamanje wakamuva wezokuxhumana uya phezulu, kunokuba intengo ephansi. Uma kuqhathaniswa nesitoreji se-server nememori yememori eminyakeni eminingana edlule, intengo izikhathi eziningana amandla futhi intengo ingxenyana. Ngalesi sikhathi, ngipopishe i-Linux lonke disk ibe yikhulu elikhulu lokushayela[...]
Phinda ufake kabusha i-Cygwin ku-Windows XP manje
Kuyinto umkhuba we-Wanna Cry we-ransom type type (Ransomware), futhi kwembulwe ukuthi i-Windows XP isasebenza emhlabeni wonke. Ngisho noma iMicrosoft ingabe ingaphandle kokusekelwa, iMicrosoft nayo ibeka ama-patches. Yebo, yami[...]
Xhuma ikhamera ye-NVR 500 kuya ku-SIP ye-Hikari Denwa
Ngu-N wehhovisi lase-Tokyo. Ngazama ukuxhuma umzila we-Yamaha "NVR 500" njengeklayenti le-SIP ye "Hikari Denwa router" PR - S300NE ". Ingemuva "i-Hikari Denwa router" i-NTT imise "PR - S300NE". Isandla[...]
Isimo se-VR ukulandelela nge-smartphone
I-Z yehhovisi le-Sapporo. Ukulandela ukulandelwa kwemvelo kuye kwaqaphela ngamadivaysi e-smartphone njengengxenye yocwaningo lwangaphakathi. Into engiyifuna ukuyenza ukubona isikhundla sokunyakaza njengokuhamba nokuyixhumanisa esikrinini se-VR (imodi yangempela). Nge-smartphone yedwa,[...]
Amamodeli wokuthuthukisa awahambisani ne-Windows 10
Ngu-N wehhovisi lase-Tokyo. Isikhathi sokuthuthukiswa samahhala kuya ku-Windows 10 sihlelelwe ukuba sibe ngo-Julayi 29, ngakho ukuthuthukiswa kwangaphakathi kwendlu kuyachuma. I-Windows 10 ibeke imishini engasetshenziswanga ngokulandelana, kodwa i-Windows 10 ayihambisani[...]
Ukusekela kwe-DB ehlukaniswe ngokugcwele nge-FuelPHP
I-K yehhovisi le-Sapporo. Ngokwesiko, ukudalwa kwesistimu yesiphakeli (i-LAMP imvelo) kugxile ekuthuthukiseni uhlaka lwaso, kodwa eminyakeni yamuva nje uhlaka oluningi oluvulekile lwemithombo lusetshenziswa. Uhlaka lwethu nalo alubi[...]
Yini ongenakuyenza nge-Unity WebGL
NguG wehhovisi eliyinhloko laseTokyo. Sekude isikhathi eside kusukela u-Unity ehambelana ne-WebGL, kodwa kubonakala sengathi ulwazi oluningi olujwayelekile lwe-Japanese mayelana ne-WebGL namuhla. Namuhla kufinyelele ebangeni engizenzile, kodwa i-Unity WebG[...]
Dala imodeli ye-3D kusuka kwesithombe nge-123D ukubamba futhi ubonise ngobumbano
Nguwe ohhovisi le-Sapporo. Ngidala ama-3D onobuhle usebenzisa i-AutoDesk 123D Catch futhi ngizame ukubonisa ukunyakaza ngobunye. I-123D Catch kuyinto isicelo esikuvumela ukuthi udale idatha ye-3D yemodeli kusuka ezithombeni[...]
Indlunkulu: 〒 171 - 0022
Ihhovisi le-Sapporo: 〒 060-0809
I-Hokkaido Sapporo City Kita-ku eNyakatho 9 - eNtshonalanga 4 - i-chome 10 - 3 iGalleria 2 F
I-Copyright (C) 2018 iMighty Craft Co.